Bada Kaaribiyaanka - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Bada Kaaribiyaanka)
Coordinates: 21°37′N 87°04′W﻿ / ﻿21.617°N 87.067°W﻿ / 21.617; -87.067
Bada Kaarabiya waa bad ku taalo Badweynta Atlaantik. Waxee ku taalaa Bariga Meksiko iyo Bartamaha Ameerika. Badaan waxaa ku dhax yaalo jasiirado aad u badan.Badani waa farac kabaxa Badweynta Atlaantik.waxaana kuyaala dawlado badan oo jasiirado u badan Badda Caribbean (Isbanishka: Mar Caribe, Faransiiska: Mer des Caraïbes; Dutch: Caraïbische Zee) waa badda badda Atlantik ee ku yaalla dhufaysyada Rugta Galbeedka. Waxaa ku xiran Mexico iyo Bartamaha Aasiya oo galbeed iyo koonfur galbeed, waqooyiga by Greater Antilles oo ka bilaabanaya Cuba, dhinaca bariga by Lesser Antilles, iyo koonfurta by xeebaha waqooyiga ee South America.
Meelaha oo dhan ee Badda Caribbean, jasiiradaha badan ee Hindida, iyo xeebaha ku dhow, waxaa si guud loo yaqaan Caribbean. Biyaha Caribbean waa mid ka mid ah badaha ugu weyn oo leh aag gaaraya 2,754,000 km2 (1,063,000 sq mi).   Meelaha ugu qotomisan badda waa Cayman Trough, inta u dhaxaysa Cayman Islands iyo Jamaica, oo ah 7,686 m (25,217 ft) oo ka hooseeya heerka badda. Xeebaha Caribbean ee xeebaha waxaa ku yaala xeebaha Gacanka, Gacanka Venezuela, Gulf of Darien, Golfo de los Mosquitos, Gulf of Paria iyo Gulf of Honduras. Badda Caribbean waxaa ku yaal geedka labaad ee ugu weyn ee adduunka, Mesoamerican Barrier Reef. Waxay soconaysaa 1000 km (620 mi) oo ku taal xeebta Mexico, Belize, Guatemala, iyo Honduras. 
Wadanada Ku Yaala
Wadanada la isku yidhaahdo Kaaribiyaanka waxaa ka mid ah:
Tirinidad iyo Tobago
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bada_Kaariibiyaanka&oldid=180862"